Amụma ọma SEO maka imeziwanye ọrụ ntanetịime Mobile
Ekwentị mkpanaka jiri nwayọọ nwayọọ dochie desktọọpụ dịka isi ụzọ internetohere. Nnyocha na-egosi na ohere mkpanaka mkpokọta nwere elu karịa 36.54% site na 2017. Ekwentị na-ekpuchi ihe karịrị 4% nke ọtụtụ okporo ụzọ weebụ.Ọzọkwa, Google ekwuputala na nzaghachi nke ebe nrụọrụ weebụ ga-enwe mmetụta na ogo mgbe Google"Mobilegeddon" melite 2017 - adventure vacations south america.
Imirikiti ihe nchọgharị weebụ nwere ike ghara ịdị na Java ma ọ bụ kuki weebụ.N'ihi ya, ahụmịghe ekwentị ga-abụ ihe dị oke egwu site na njedebe ndị a. Ịtụle iji ekwentị eji eme ihe dikandabere maka ndị na-ere ahịa n'Ịntanet, e nwere niche nchịkọta nke gụnyere ndị ọrụ ekwentị. Ndị chọrọ ịchọta akụkụ nke okporo ụzọachọrọ ịmepụta weebụsaịtị ndị enyi na enyi, nke na-ebu ngwa ngwa na igwe karịa desktọọpụ.
Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Jason Adler na-atụ aro ndụmọdụ ndị na-esonụ iji melite mmepe nke ebe nrụọrụ weebụ.
1. Mwepu mwepụ nke mpempe akwụkwọ ekwesighi ịbụ ihe na-emechi anya
Imepụta ebe nrụọrụ weebụ nke na-anabata ngwaọrụ mkpanaka ga-abụ isiihe mgbaru ọsọ. Ọrụ a kwesịrị ịmalite ozugbo ngwabido weebụ malitere ịbanye n'ọtụtụ ọnọdụ dị ka o kwere mee. Cheta nandị ọbịa si na smartphone nwere ike ịba ụba karịa ndị sitere na kọmputa desktọọpụ.
2. Wepụta ebe dị mfe
Ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka gị kwesịrị ịrụ ọrụ n'enweghị ihe mgbochi na otutu mobilenyocha na ihe nchọgharị. Nhọrọ dị mfe bụ ịtụgharị..Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime ka ndị ọbịa chọta ọdịnaya ha na-achọn'ihi na ozugbo ha buliri saịtị gị. Echefukwala ime ka nchekwa ahụ dịkwuo. Ọtụtụ ndị na-eme ka cyber-agha dakwasị ndị na-adịghị ikenwere ike ịbụ na saịtị ndị a.
3. Tinye ihe nkwado dị n'elu
Ịgagharị na ngwaọrụ mkpanaka na-emekarị ngwa ngwa, karịsịa na njikọta ngwa ngwaọsọ ọsọ. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma dị elu n'elu iji mee ka onye ọrụ mee usoro ntinye ma ọ bụ ihe ọmụma dị mkpa.Ịmalite na ọdịnaya dị oke ala nwere ike ime ka mmadụ hapụ ndị ọbịa kama ịtụgharị ha n'ime ndị ahịa.
4. Jụọ ndị ọrụ gị maka nzaghachi ha
Njikọ mgbe niile na ndị na-eji ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ezigbo àgwà.Ebe nrụọrụ weebụ wepụtara maka ndị mmadụ na-adabere nzaghachi ha iji meziwanye na mpaghara ya dị iche iche.
5. Na-ebuli maka bandwit
Ndị mmepe ga-ebuli saịtị mkpanaka iji meghachi omume ngwa ngwa n'enyefebandwit. Ihe onwunwe ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka ga-enwe ntakịrị ebe nchekwa maka ịdị mfe nke ibe ibebata.Cheta, ọtụtụ ndị ahịa na-eji internet ịntanetị na atụmatụ netwọk mkpanaka bụ nke a na - ejighị n'aka.
6. Nwee ọganihu
Ịme ezigbo UI site na ọkọlọtọ siri ike. Ọ bụ ihe okike ịkwalite gburugburu ebe obibinke na-aga n'ihu na nyocha na mmelite na njirimara na nke ọhụrụ. Imeziwanye ihe mgbe nile nwere ike inyere aka idozinchịkọta yana imezi nzaghachi nke weebụsaịtị.
Ịlele njirimara arụmọrụ gị bụ ihe dị mkpa ị ga-atụlemgbe ị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ. Ezi ebe nrụọrụ weebụ ọ bụghị nanị na-emetụta ogo kamakwa inye ndị ahịa nnukwu nchọgharịahụmahụ na-akwado ihu ọma. N'okpuru ntuziaka ndị a dị n'elu, ọ ga-ekwe omume ịmepụta weebụsaịtị na mobile enyiinterface maka ndị ọrụ smartphone. Mmalite nke ebe nrụọrụ weebụ na-enwe mmetụta dị mma na arụmọrụ zuru oke nke saịtị ahụ ma nwee ikenyere aka imezu ihe mgbaru ọsọ.